အ​ေရျပားအတြက္​ — Steemit
gold-bloger1 (33)in #artzone •3years ago
ဒါဟာအများအပြားပြည်နယ်များအတွက်အမေရိကန်တွေတိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေများတွင်စစ်သားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့လက်နက်ကိုရယူနိုငျကွောငျးတုန်လှုပ်ဖွယ်ပါပဲ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရေပြားဆေးဝါးအချို့အမျိုးမျိုးရယူထက်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အလေးအနက်ထား
ငါရိုင်ဖယ်သေနတ်များနှင့်သေနတ်နဲ့ပတ်ပတ်လည်ကြီးပြင်းလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုတစ်ဦးဆေးရုံအနီးသေးငယ်တဲ့မစ္စစ္စပီမြို့ဆင်ခြေဖုံးတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့ခဏ၌, အဲဒီမှာဆေးကုသမှုခံယူထားတဲ့အကျဉ်းသားအဆိုပါအကျဉ်းသားဖမ်းမိခဲ့သည်သည်အထိရဲကင်နာများကိုနားထောငျသောသူတို့တှငျအခြို့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ, လွတ်မြောက်ရန်လိမ့်မယ်။
ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်တစ်ခုလွတ်မြောက်လာသောတယ်လီဖုန်းသုံးစွဲဖို့တောငျးဆိုနတညဉ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးကိုလာခေါက်တယ်။ အကြှနျုပျ၏အဒေါ်ဧညျ့ပြသရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအကျဉ်းသားဖြစ်ကောင်းတောအုပ်ထဲသို့သော့ခတ်လေ၏။ သူတို့လွတ်မြောက်လာသောခြေရာခံအဖြစ်မကြာခင်မှာပဲအလုံအလောက်ရဲလွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးကိုလာခေါက်တယ်။ (သူတို့ကသူ့ကိုဖမ်းမိ။ ) ငါ၏အဒေါ်ကြောင့်ညဦးယံအချိန်တစ်ဦးသေနတ်ထိမိတော့မှသော်လည်းသူမဆက်ဆက်ရွေးချယ်စရာများများလုပ်ဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့, ထိုသို့အိမ်တော်၌တဦးတည်းရှိသည်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဖြစ်အပျက်ငါ့အပေါ်မှာအထင်ကြီး။ သို့သော်ဖလော်ရီဒါအတွက် Parkland ပစ်ခတ်မှု, Marjorie Stoneman ဒေါက်ဂလပ် High School မှာ, မှားလက်၌တက်အကွေ့အကောက်များသောဥပဒေရေးရာသေနတ်အများအပြားဒုက္ခနှစ်ပေါင်းခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးခဲ့, ငါယခုကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ယခင်ကဒုတိယအပြင်ဆင်ရေးဆံပိုင်ခဲ့ကြသူယုံကြည်မိပါတယ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်သွင်း - ဘုံ-အသိသေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုထောကျပံ့သငျ့သညျ။
အမေရိကန်အစိုးရဒါအဖြစ်ကောင်းစွာ-ရန်ပုံငွေယန်ဟာကြောက်မက်ဘွယ်တာဝန်များအတွက် fit ကြသည်မဟုတ်သူကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမ၏လက်ထဲကသေနတ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပျက်ကွက်ပါကစာသားကလူကိုသတ်ဖြတ်နေသည်ကျိုးသည်။ တစ်သေနတ်သမား Newtown, Conn 20 ဦးပထမဦးဆုံးတန်းကျောင်းသူလေးကိုသတ်ကတည်းကငါးနှစ်အတွင်း။ အနည်းဆုံး 438 အမေရိကန်အမျိုးသား, အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်များဂွန်အကြမ်းဖက်မှုမော်ကွန်းတိုက်သည်နှင့်အညီ, ကျောင်းပစ်ခတ်မှုအတွင်းသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကတဆယ်ခုနစ်တစ်ဦးတရားဝင်ရရှိသော AR-15 ရိုင်ဖယ်နှင့်အတူအသက် 19 နှစ်အရွယ်အသုံးပြုပုံဒီနှစ်၏ဒုတိယအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကျောင်းတွင်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်။ Parkland အတွက်လူသတ်သည်သူ၏ရိုင်ဖယ်ရရှိသောနှင့်အထက်တန်းကျောင်းမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့နှင့်အတူလွယ်ကူခြင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတခါရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ယခုမူကားဒုက္ခသောမှတ်ဥာဏ်ငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။
ငါနေတိုး / ISAF ဌာနချုပ်မှာအလုပ်လုပ်အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိနေစဉ်တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်, ငါသည် AK-47 ရိုက်ကူးအကြောင်းကိုငါ့အနှောင်းပိုင်းတွင်ဖခင်မှမျးတငျ, သူသည်သူတဦးတည်းမိမိကိုမိမိမဝယ်ချင်ခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပတ်ပတ်လည်သန်းခေါင်မှာတစ်ညနေဖုန်းမြည်နှင့်ငါ၏မိခင် groggily ဟုလျှောက်ကြ၏။ လိုင်းပေါ်မှာလူကိုကွယ်လွန်သူနာရီတောင်းပန်ပေမယ့်သူကလြှို့ဝှကျစကားအပေါ်ခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့သူကသူ့မိခင်အားဖြင့်ဖမ်းမိတဲ့မရှိဘဲမခေါ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်သူမ၏သို့ပြောသည်။ သူက AK-47 အဘို့အကြှနျုပျ၏အဘ၏လိုကြော်ငြာမြင်ရြတခဲ့လေသည်။ ကျွန်မအမေကိုတဖန်ကျွန်မတို့အိမ်မှာမခေါ်ဘယ်တော့မှသူ့ကိုသို့ပြောသည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီကအခြားဆွေမျိုးသမျှမျှကြီးကြပ်သို့မဟုတ်စက္ကူလမ်းကြောင်းနဲ့ဥပဒေရေးရာလူတစ်ဦး-to-လူတစ်ဦးငွေပေးငွေယူအတွက် AR-15 ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါရောင်းချသူပင်ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့်ကောင်းသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအပို 30-ပတ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းအများအပြားကျည်အတွက်ပစ်ချ၏။
။ VideoCOMING UP Play ... သင် Guns အကြောင်းခက်ခဲသောစကားပြောဆိုမှု REIMAGINE တဲ့အခါဘာဖွစျ Accutane ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပြင်းထန်သောမွေးဖွားချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောမြင့်မားထိရောက်သောဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များမူးယစ်ဆေးစဉ်းစားပါ။ 2000 ခုနှစ်တွင် Accutane ယူပြီးနေချိန်မှာကိုယ်စားလှယ်။ Bart Stupak ရဲ့ 17 နှစ်အရွယ်သားသတ်သေ, နှင့်ကျန်ရစ်သူကွန်ဂရက်မူးယစ်ဆေးပိုမိုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းထောက်ခံ။ 2004 by တစ်ခုအကြံပေးကော်မတီက FDA ကတစ်ဦးမဖြစ်မနေအမျိုးသားရေးလူနာ registry ကိုတည်ဆောက်ရန်အကြံပြုထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်အေဂျင်စီခေါင်းဆောင်မှုနှင့် Accutane ရဲ့ထုတ်လုပ်သူဟော့ဖ်မန်း-La Roche က "အနက်ရောင်စျေးကွက်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်" နှင့်စိတ်ရှည်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်ဟုဆိုကာ, ထိုကဲ့သို့သောတဲ့စနစ်ဆန့်ကျင်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအေဂျင်စီကအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်နှောင့်နှေးပေမယ့်စျေးကွက်အနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဆွဲထုတ်ဖို့ပါတီနှစ်ခုဥပဒေကြမ်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုနောက်ဆုံးတော့လူနာ, ဆေးဝါးနှင့်ဆရာဝန်ပါဝင်မှုလိုအပ်သည့်လူနာ registry ကို၏ဖန်တီးမှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါယေဘုယျဗားရှင်းနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်သော်လည်း 2009 ခုနှစ်တွင် Roche, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာတရားကုန်ကျစရိတ်ရန်, US ရှိ Accutane ၏အရောင်းရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးရရှိရန်အလွန့်အလွန်နှောင့်အယှက်မယ့်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကများဝယ်ယူရန်၏ဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့်သွား၏ - လစဉ်ဆရာဝန်၏ချိန်းသွားအသွေးအားရေးဆွဲတဲ့ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်မဟုတ်ခဲ့သေချာစေရန်ဖုန်းကိုကျော်တစ်ဦးပဟေဠိတာ - ကငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့လို့ပဲ။ ငါခြေလှမ်းများအချိန်တွင် maddening နည်းနည်း Accutane ရဖို့ရှာတွေ့, ငါ့အဖေအသုံးစရိတ်များအတွက်ငါ့ကိုပျော်စရာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကအနတ္တဆင်ခြင်၏။ ထိုအဟုတ်ငါဖြစ်ကောင်းသလောက်သူက AK-47 လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုသတ်နိုင်မယ့်အရေပြားကိုမူးယစ်ဆေးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အမေရိက၏ဂုဏ်အသရေရဲ့ - ငါတို့သည်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆောင်ရွက်မှုများမှတဆင့်သွားပါလျှင်, နှစ်ဦးစလုံးရနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဘယ်လိုထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယအပြင်ဆင်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်စှနျ့မရှိဘဲသေနတ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့တိုင်းတာမှု restore သလဲ? တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်း floating ခန့်မှန်းခြေ 310 သန်းသေနတ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖွယ်ရှိကြောင်းသေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မီ, ပြည့်စုံတစ်လောကလုံးနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများနှင့်မျှမကပိုသေနတ်-ပြပွဲအရောင်းအဘို့အလစ်ကွက်ဟာကွက်များနှင့်လက်နက်ငယ်များလူတစ်ဦး-to-လူတစ်ဦးလွှဲပြောင်းဖြစ်ရှိလိုအပ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းဆေးပညာ၏ရာဇဝင်များတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုဧပြီလ 2015 ခုနှစ်တွင်စတင်နှစ်နှစ်ပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်းလက်နက်ဝယ်ယူငါးခုသေနတ်ပိုင်ရှင်တွေထဲကတစျခုလျှက်မပါဘဲပြုခန့်မှန်း
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gold-bloger1 from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
Congratulations @gold-bloger1! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :